दासढुंगाको समग्र विकासको लागि डिपिआर तयार, यसरी गरिँदै छ विकास - Thulo khabar
चितवन, साउन २७ । दासढुंगालाई पर्यटकीय र राजनीतिक तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । दासढुंगाको समग्र विकासको लागि डिपिआर तयार गरिएको हो ।
तयार प्रतिवेदनमाथि आज आयोजित कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ । मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान दासढुंगा शाखाले संयोजन गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले दासढुंगालाई राजनीतिक तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेश सरकारका सल्लाहकार जेएन थपलियाले दीर्घकालिन महत्व राख्ने दासढुंगालाई राजनीतिक तीर्थस्थल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले
नेकपा (एमाले) का तत्कालिन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको सवार जीपलाई जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने बताउनुभयो । मदनको जन्मघरको झल्को दिने गरी घर निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं प्रभासभा सदस्य विजय सुवेदीले सरकारले दासढुंगाको चरणबद्ध विकासका लागि डिपिआर निर्माण गरिरहेको बताउँदै यसमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले एउटा भवन निर्माणको काम भईरहेको भन्दै उहाँले दासढुंगाको माथिल्लो क्षेत्रमा जाने सडक पक्की बनाउनका लागि बोलपत्र आव्हान गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा एमाले नेताहरु हरि सापकोटा, रमाकान्त सापकोटा, नारायण अधिकारी, शान्ती अधिकारी, डा. तिलचन्द्र भट्टराई, रामप्रसाद न्यौपाने, शम्भु सुवेदी, बद्री अधिकारी, लगायतले डिपिआरबारे सुझाव राख्नु भएको थियो । उहाँहरुले दासढुंगा प्रवेश गरेको आभास हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने, मदन र आश्रितसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई म्युजिममा राख्नुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयसँग जोड्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
भतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ का अध्यक्ष मानबहादुर थापा मगरले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको समयमा नै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इञ्जिनियर कुमार धमलाले तयार डिपिआरबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार दासढुंगाको राजमार्ग माथिको भागलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विकास निर्माण गर्नका लागि डिपिआर तयार गरिएको बताउनुभयो । तल्लो भागमा प्रशासनिक भवन, सभाहल लगायतका संरचना, बीचको भागमा पार्क र माथिल्लो भागमा अनुसन्धान केन्द्र रहने तयारी डिजाईन तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर डिपिआर परिमार्जन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का तत्कालिन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रित सवार जीप बि.सं. २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगाबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । रहस्यमय उक्त दुर्घटनामा परी दुवै नेताको निधन भएको थियो ।